“सात दिन-भित्रमा तपाइले सोचेको काम ब’न्नेछ,बे-वास्ता नगर्नुहोला,पूरा पढेर ॐ लेखि से’यर गरौं”! – Sanjal Nepal
Homeमनोरंजन“सात दिन-भित्रमा तपाइले सोचेको काम ब’न्नेछ,बे-वास्ता नगर्नुहोला,पूरा पढेर ॐ लेखि से’यर गरौं”!
December 18, 2020 admin मनोरंजन 3896
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला!ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिवलिंग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिंग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिंग हो भनिएको छ ।शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिंग हो ।शिवलिंगको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिंगको अर्थ लिंग वा योनी होइन ।वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् ।
निःसन्तानलाई सन्तान दिने अद्भूत शक्ति युक्त दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन गर्दै आज – ०३ पौष २०७७ शुक्रवार को राशिफल हेर्नुहोस |
November 29, 2020 admin मनोरंजन 6444
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग म’स्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर
December 2, 2020 admin मनोरंजन 8624
अञ्जलि राई । बुढेसकालमा सबैजना आफ्ना नातिनातिना खेलाउने सपना देख्छन् । बुढेसकालमा उनीहरु नातिनातिना खेलाउनु खुशी र सम्पत्ती भन्दा धेरै माथि मान्दछन् । तर भोपालमा यस्ता वृद्ध हुनुहुन्छ जसले नाति–नातिनाहरुको जन्ममा निषेध गरेका छन् ।
December 23, 2020 admin मनोरंजन 6039
LEX 18 agenda conversation: Job club (486379)